Eyona ndlela iphambili yokulinganisa i-KJM-L8-Uvavanyo lwegazi UFuluoEr
Isitshixo se-1 sokulinganisa ngokulula i-KJM-L8 — Uvavanyo lweGazi loVavanyo / Ukulinda koSapho
Uhlobo esihlahleni sphygmomanometer elektroniki KJM-L8
Ukusasazwa kwelizwi, isandi esiguquliweyo, inkcazo ephezulu yesikrini esikhulu
Iinkcukacha zeMveliso Ngokusekwe kumgaqo woyilo lwe-oscillographic, le mveliso inokukhawuleza, ngokuchanekileyo nangokuthembekileyo ukulinganisa uxinzelelo lwegazi.
Inombolo yomzekelo: KJM-L8.
Le mveliso sisixhobo sokulinganisa uxinzelelo lwegazi elenza ukulinganisa uxinzelelo oluphezulu lwe-systolic, uxinzelelo lwe-diastolic ephantsi kunye nokubetha kwentliziyo ngaxeshanye. Le mveliso isekwe kumgaqo woyilo lwe-oscillometric, kwaye inokulinganisa uxinzelelo lwegazi ngokukhawuleza, ngokuchanekileyo nangokuthembekileyo. Ububanzi besicelo: Le mveliso ilungele abantu abadala kuphela. Indawo yokufaka isicelo: Le mveliso ilungele usapho okanye ukusetyenziswa kweklinikhi.
Uhlengahlengiso lwevolumu: Kuluncedo olukhulu kule mveliso ukulungelelanisa ivolumu. Isikrini semveliso: I-LCD ibonakalisa isikrini somboniso wedijithali, isikrini esikhulu se-HD kunye nokufunda okucacileyo.
1. Usasazo ngelizwi Unako ukunyenyisa ivolumu
2.Isikrini se-LCD esibonisa isikrini sedigital, inkcazo enkulu yesikrini esikhulu,
3. I-SOC Core Algorithm, imilinganiselo echanekileyo
Umsebenzi omnye, uxinzelelo olukrelekrele
5. Ukubeka iliso ngendlela engaqhelekanga
Ubunzima obukhulu: 161g ubungakanani bebhokisi yesipho: 80 * 80 * 90MM Ukupakisha ubungakanani: ii-PC ezingama-50 zokupakisha ubungakanani: 42 * 41.5 * 20.0CM Ubunzima bebhokisi yonke: 8.8KGS
Indawo yokulinganisa: isihlahla
Uluhlu lomlinganiso: uxinzelelo lwegazi 0 ~ 280mmHg (0 ~ 37.3kpa), ukubetha kwenqanaba 40 ~ 195 beats / min
Ukulinganisa ukujikeleza kwesihlahla: 13.5 ~ 21.5cm
Ukuchaneka kwemilinganiselo: uxinzelelo lwegazi x ± 0.4kpa (± 3mmHg), ixabiso lokubetha kwenqanaba le-5%
Indawo yokusebenzela: iqondo lobushushu elisebenzayo: 10 ℃ ~ 40 ℃;
Ukufuma okusebenzayo: 40% ~ 85%
1. 99 icwangcisa iqela lememori :. Kwizizwe ezi-2 ezinomhla kunye nexesha
2. Linganisa uluhlu: Uxinzelelo: 0-299mmHg (0-39.9kPa) Pulse rate: 40-180times / min.
3. Ukuchaneka: Uxinzelelo: ± 3mmHg (ngaphakathi ± 4kPa). Umlinganiselo wokubetha: ukuchaneka yi-± 5%
4. Umboniso: Umboniso wekristale engamanzi
5. Ibhetri: Iibhetri ezimbini zealkali
6.Ilizwi eliphilayo (Ngokuzithandela)
7. Ubomi bebhetri: amaxesha angama-300 phantsi kwemeko yebhetri e-7 ene-alkaline ene-23 ℃.
8. Ukusebenza kwamaqondo obushushu: 5.0 ukuya kuma-40.0 ° C, ≤85% RH
9.Ukugcina amaqondo obushushu: -20.0 ukuya kuma-60.0 ° C, ≤95% RH
10. Ubukhulu: 115x96 x59mm
11. Ubunzima: 180g (ngaphandle kobunzima bebhetri)
12. Ukucima ngokuzenzekelayo: ukucima umbane xa kungasebenzi mizuzwana esi-8
Egqithileyo Umvelisi we-2L ophathekayo we-oksijini we-SK9000 wenqwelo-moya ye-oksijini
Okulandelayo: I-5L Medical Oxygen Concentrator SD-05W -— Ukuboniswa kwexesha lokwenyani koxinzelelo lweoksijini, isiphumo sonyango lweoksijini siyabonakala
Ukujonga Ukujonga uxinzelelo lwegazi ngeyure
Ukujonga uxinzelelo lwegazi ngokuzenzekelayo
Ukujonga uxinzelelo lwegazi
Inkqubo yokuHlolwa kweGlucose
Ingalo ephezulu ye-sphygmomanometer ye-elektroniki [Umzekelo n ...
YM2T9 Intandokazi yoMntwana
[1 umfuziselo numbe